विज्ञान प्रविधि – Bihani Post
Home / विज्ञान प्रविधि
फेसबुकमा विश्वव्यापी समस्या, भएको के हो ?
2 weeks ago	विज्ञान प्रविधि 0
फेसबुकमा विश्वव्यापी समस्या, भएको के हो ? सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबुक’मा समस्या आएको छ। केही प्रयोगकर्ताले फेसबुक नखुलेको गुनासो गरेका छन् भने केहीले ‘न्युज फिड’ खाली देखिएको र केहीले ‘प्रोफाइल’मा प्रवेश गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। बुधबार रातिदेखि फेसबुकसहित इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपमा समस्या देखिएको हो। विश्वका विभिन्न भागमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम र …
होसियार फेसबुकमा झुक्किएर पनि नगर्नुस यि ११ काम | नत्र तपाईको सर्वस्व जाने छ
January 14, 2019	विज्ञान प्रविधि 0
सावधान, यसाे गर्दा पड्किन्छ माेबाइल!
January 5, 2019	विज्ञान प्रविधि 0
हामिले माेबाइल फाेन पड्किएर दुर्घटना भएका खबर सुनिरहेका हुन्छाैँ । कतिकाे त ज्यान समेत गएकाे खबर अाएकाे पाइन्छ । किन पड्किन्छ माेबाइल ? यसका सम्भावित कारणहरू निम्न छन् । माेबाइल रातभर चार्जमा राखेर छाेड्दा : धेरै मानिसको बानी हुन्छ रातभर मोबाइल फोन चार्जमा राखेर सुत्ने र बिहान चार्जबाट थुतेर चलाउने …
नेपालीले बनाएको जहाजमा यसरी उडे महावीर पुन हेर्नुहोस भिडियो सहित
October 11, 2018	भिडियो, विज्ञान प्रविधि 0
अमेरिका बस्ने नेपाली पाइलट प्रमोद रेग्मीले आफै जहाज बनाएर त्यसमा नेपालका प्रविधि विज्ञ महावीर पुनलाई अमेरिकी आकाशमा उडाएका छन् । पाइलट रेग्मीले डेढ करोड आफ्नै लगानीमा १८ महिना लगाएर बनाएको जहाज अमेरिकी हवाइ विभागमा सूचिकृत भएर उडान अनुमति समेत प्राप्त गरि उडान भरिरहेको छ । नेपालबाट अमेरिका पुगेका महावीर पुन …
युट्युबले ल्यायो नयाँ फिचर, भिडियो हेर्नेका लागि यस्तो फाइदा
October 8, 2018	विज्ञान प्रविधि 0
असोज २२, काठमाण्डौ | भिडियो स्ट्रिमिङ्ग प्लेटफर्म युट्युबमा पछिल्लो समय एक पछि अर्को गर्दै नयाँ फिचरहरु थपिंदै गइरहेका छन् । फिचरहरु थप्ने क्रममा पछिल्लेपटक युट्युबले ‘मिनी प्लेयर’ नामक नयाँ फिचर थप गरेको छ, जुन प्रयोगकर्ताका लागि निकै उपयोगी हुनेछ । युट्युबको तल्लो बारमा एउटा बक्स जस्तै मिनी प्लेयर बटन दिइएको …
सस्तो दामको पल्सर बाइक खोज्दै हुनुहुन्छ ? पूरानो नखोज्नुस्, अब सस्तैमा नयाँ नै चढ्नुस्
June 30, 2018	रोचक खबर, विज्ञान प्रविधि 0
के तपाईले आफूले चढ्दै गरेको पल्सर बाइक बेच्नु भयो ? अनि पल्सरमै तपाईको हात बसेको छ । अब तपाईले विगतको भन्दा पनि धेरै सस्तो दाममा एबीएस सुविधासहितको पल्सर चढ्न पाउनु हुने भएको छ । बजाज मोटरसाईकल पछिललो दिनमा भएको बिक्री ग्रोथबाट निकै उत्साहित भएको छ । कम्पनीको सबैभन्दा सफल मोडल …
बिदेशबाट नेपालमा फ्रीमा फोन गर्ने यस्तो छ तरिका, हेर्नुहोस्(भिडियो सहित)
June 5, 2018	भिडियो, विज्ञान प्रविधि 0
जेठ । काठमाडौं । बिदेश देखि नेपाल फोन गर्नुहोस फ्रीमा…अनलिमिटेड मिनेटको सुविधा सहित ।नेपालबाट नेपाल मै पनि गर्न सकिने
मोबाइल हराएर चिन्तित हुनुहुन्छ? हराएको मोबाइल १ मिनेटमै भेटाउने सजिलो तरिका (भिडियो सहित
May 27, 2018	विज्ञान प्रविधि 0
मोबाइल हराएर चिन्तित हुनुहुन्छ? यदी त्यसो हो भने अब यसरी १ मिनेटमै पत्ता लगाउनुहोस् तपाँइको मोबाइल कसले लग्यो भनेर। यो जानकारी सबैको लागि निकै नै महत्वपूर्ण रहेको छ किनकी अहिले हाम्रो दैनिक जीवनमा मोबाइल हामीलाई नभइ नहुने चीज जस्तै बनेको छ। मोबाइल फोन यति धेरै आवश्यक चिज बनिसकेको छ कि …
युवाहरुलाई मोबाइल ल्यापटपसम्बन्धी सक्षम बनाउँदै एलाईन्स
April 1, 2018	विज्ञान प्रविधि 0
काठमाडौं । विगत ८ वर्षदेखि काठमाडौंको पुतलीसडकमा रहेर बेरोजगारीको समस्याले जरा गाडेको अवस्थामा युवाहरुलाई दक्ष बनाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दै आएको एलाइन्स ल्यापटप एण्ड रिपेयरिङ सेन्टर अब नयाँ ढंगबाट सुचारु हुने भएको छ । आइएसओ र सीटीईंभीटीबाट मान्यता प्राप्त भएसँगै नयाँ ढंगबाट कक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको सेन्टका सञ्चालक दिपक पोखरेलले …
January 30, 2018	विज्ञान प्रविधि 0
अब फेसबुकमा स्टाटस लेख्न पनि टाइप गरिरहन पर्दैन । बोल्यो, कम्प्युटरले टाइप गर्दिन्छ । कपि गर्यो अनि फेसबुकमा पेस्ट गर्यो । कुनै समय थियो जुन बेला टाइप गर्न जानेको छु भन्दा गौरवको कुरा हुन्थ्यो, तिनलाई कम्प्युटरका जानकार मानिन्थ्यो । र, टाइप मज्जाले गर्न सक्नेहरु व्यवसायिकरुपमा पनि सफल हुन सक्थे । …